Sevilla Football Diary- Akụkọ Ụmụaka nke Igwe na Oge Kpakpando
Nabata na Sevilla Football Diary of Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography nke ugbu a na gara aga Sevilla FC Football Stars. N'ebe a, anyị enyela ndị na-agụ akwụkwọ ohere, ebe nchekwa nke Ugbu a na kpochapụwo Sevilla Football Stars ndị gụrụ egwuregwu mara mma nke bọọlụ.
O doro anya na Sevilla emewo ka bọlbụ na ndị agbụrụ ya dị mpako. Ndị ọrụ ya ugbu a na ndị kpochapụwo ya kwesiri ịbụ ndị na-agba ọsọ na Football Brochure of Fame.
A na-arara LifeBogger iji nye ndị niile na-agụ ya, akụkọ zuru ezu nke ihe ndị dị ịrịba ama na eziokwu site na nwata ndị a n'oge nwata ruo ụbọchị. Nyocha ahụ na-agụnye akụkọ ndụ ha tupu ama ama, ndụ ezinụlọ, ndụ mmekọrịta, esemokwu tinyere ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amaghị ihe banyere ha. Ugbu a n'enweghi ọganihu ọzọ, ka ịmalite;
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye aha ya bụ "Lenglet". Anyị Clement Lenglet Akụkọ Nwatakịrị Nkọwa Eziokwu Akụkọ Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị ...
Ihe omuma anyi nke Wissam Ben Yedder na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezinulo ya, nwunye ya ibu, ibi ndu, uru di na nke onwe ...
Jules Kounde Biography anyị na-agwa gị Eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, Ndụ Mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Enyi nwanyị / Nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, Ndụ Nke Onwe na Net Net. Na ...
Akụkọ ndụ Sergio Reguilon na-agwa gị Eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, ndị nne na nna, ezinaụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka ọ bụrụ, Net Worth, Web and Life Life. Na ...
Hale Hendrix - Nwere ike 22, 2021 0
LB na-egosi Full Story of Russian Winger onye amara aha ya mara; "2018 World Cup dike". Anyị Denis Cheryshev Storymụaka Akụkọ na enweghị isi ...
Hale Hendrix - Nwere ike 20, 2021 0
LB na-egosi Full Story of a French French Genius onye naanị ya maara aha ya "Nzonzi". Nwa Steven Nzonzi nke umuaka n'akwukwo nke oma ...
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; 'Raketa'. Anyị Ivan Rakitic Child Story plus na-enweghị ihe omuma Eziokwu na-ewetara ...
Ihe edemede anyị na-enye gị mkpuchi zuru oke nke Ever Banega Childhood Akụkọ, Eziokwu Biography, Ezinụ, Ndị nne na nna, Ndụ mbụ, ibi ndụ, enyi nwanyị / nwunye, ụmụaka Ndụ Ndụ na ...